Umshini webhotile kumatshini wesitampu eshushu eshushu, umatshini wokutshitshisa okutshitshiweyo kwe-HCmachine-Chinese,China,Manufacturer,Supplier,Factory,Price
South Africa Xhosa Umshini webhotile kumatshini wesitampu eshushu eshushu, umatshini wokutshitshisa okutshitshiweyo kwe
Ukusetyenziswa: Umatshini wokutshiza okutshintshileyo wenziwe ngekhampani yenzelwe ukutshintshela ngokuzenzekelayo umzobo onqamlekileyo kwizitifiketi ezijikelezayo kunye nezingavumelekanga. Ishicilela kwicala lebhotile yebhotile.
I-HC-HA-CapC Umatshini wesitampu eshushu esitshatileyo
I-1: Iyonke idla amanzi: 2.2KW;
2. Ubume bokushisa kumgama: I-20-300 ° C;
3. Ukunyanzela uxinzelelo lomoya: 0.6MPA;
4. Ixabiso leMveliso: I-DIA: 15-34MM L: 25-60MM
5. Ukuxhoma kweMagx Ukukhawuleza: 4200pcs / hr
6. Uhlobo lwangaphandle: 210 * 140 * 230CM
7. Isisindo somzimba: 800KG
yenziwe ngu-www.hc-printing-machine.com, imeyile: hcprinter@hotmail.com